Isihlonzi imihlaba ezintsha - yilokho edonsela abadlali e imidlalo ye-computer. Lapha bafunde umlando abanye yonke engaziwa Bakhumbule izenzakalo zezwe lakhe siqu, kancane kuphela ukushintshwa. Ngokuqondene 'Maynkrafta "best game-Sandbox emlandweni namuhla, khona ukuhlola izwe kuthatha isikhathi esiningi idlala. Izinto cwaningo uthola, igumbi ukhululekile ukuze kwakhiwe, imbewu izitshalo ezidliwayo nezilwane, afaneleka ukulima epulazini.
Ngaphandle ucwaningo "Maynkraft" obungenza ngezinye izikhathi ngaphansi ezithakazelisayo. Kodwa kwenzekani uma owufaka game imihlaba ambalwa ongakubona? Ngokwemvelo, kuyoba mnandi ngezinye izikhathi, ngakho akekho wamangala lapho izwe "Maynkraft" babe kwezulu nesihogo. Lapha, awaveli endimeni yawo ajwayelekile - bamane ukudlala indima amasayithi amasha ucwaningo ngokulungiselelwa ezifanele. Kodwa-ke, abadlali eziningi ezintsha kukhona umbuzo: indlela yokwenza portal esihogweni e "Maynkraft"? Asinakusho ukuthi kuyinqubo elula, ngakho udinga sondelana lo msebenzi ngokucophelela okukhulu.
Uma uya kukhishwe izinsiza ingosi esihogweni, bese uyisebenzise, khona-ke kungase kudingeke lonke iqoqo amathuluzi ezahlukene. Ukuze uqonde ukuthi ukwenza i-portal ukuze isihogo "Maynkraft", kumele ube ukufinyelela wonke nazo zonke ezidingo ezidingekayo. Ngokuyinhloko, kungenxa obsidian, omunye amabhlogo eziyivelakancane ezenzeka emdlalweni. Ukuze ukukhiqizwa yayo, uzodinga pickaxe idayimane - it is a diamond. Ayikho enye, yebo, kunegolide ngeke zisebenze. Akwaziwa ukuthi waqondisa onjiniyela, kodwa umthombo uqobo uwela amabhlogo obsidian kuphela uma iyunithi uhlukanise Ipiki eyenziwe amadayimane. Kungenjalo, iyunithi bazakuchithwa, kepha wena kuyoba ngaphandle iningi obsidian.
Uyothola badinga angasindi, kuyoba usizo uma kusebenze portal, futhi ibhakede lamanzi - kuyobazuma mayelana naleli cala endaweni ethile ukuthola insimu lava. Kodwa izinto zokuqala kuqala: ukuya umbuzo zendlela yokwenza i-portal ukuze isihogo "Maynkraft", kumelwe siqale ukubhekana obsidian.
Kanjani ukuze uthole obsidian?
Ukuthi lo kusebenza ngempela ezingavamile, kodwa ukuthola kusenzima kungenzeka. Ngenxa yalesi udinga ukuya phansi ezingeni eliphansi kakhulu emhumeni, kuyinto efiselekayo ukuthi ezingeni laliphansi okweshumi. Lokhu kusho ukuthi ngeke njalo emhumeni uzothola idiphozithi yanoma obsidian, ukuze uhambo kungase kube esidumazayo. Kodwa uma usafuna ukuxazulula imfumbe indlela yokukwenza portal esihogweni e "Maynkraft", bese uzoba ukuba ube nesineke. It nawe kudingeka singagcini nje ngokuzuza ukuthola umthombo kwesokudla - ngisho uma uthola khona, uzodinga ukuchitha isikhathi esiningi bezama ukuthola. Kodwa ukuphela olungisisa izindlela, ngakho uzinike isikhathi ukukhiqizwa, ikakhulu uma kucatshangelwa iqiniso lokuthi udinga amayunithi nane kuphela. Kuyinto kule nombolo kungabonwa uma zibhekwa zokupheka "Maynkraft" - portal esihogweni ulula design, kodwa lokho nzima kakhulu ukuthola izithako ze-ke.
Dala kusezandleni zakho obsidian
Kodwa uma ungenayo isifiso ngehlele zonke emhumeni ukuthola imithombo efanele, ungazama ukwenza obsidian sakhe. Ukuze wenze lokhu uzodinga ibhakede efanayo yamanzi usuke usubeke ngaphambili. Uma uhlangabezana emkhakheni iso, udaka ke uthele ngokucophelela amanzi eduze kwayo - ukuze wawugelezela ngqo udaka olushisayo. Ukusabela kuyabathelela obsidian efanayo, lapho ufuna ukwakha i-portal ukuze isihogo "Maynkraft".
Kodwa lapha kudingeka uqaphe kakhulu - oda kufanele kube ngaleyo ndlela: amanzi kumele impingement phezu lava. Uma lava ngeke impingement phezu kwamanzi, noma wena umane uhlanganise lezi izithako ezimbili, khona-ke ematfuba ukuthola obsidian incane kakhulu. Ezimweni eziningi, uzoba itshe elula, okuyinto umdlalo kuqedile. Uqinisile imithetho efanayo iyasebenza ku-version lula umdlalo, "Maynkraft 2d". Indlela yokwenza i-portal ukuze esihogweni kukhona kulula ngisho ukuqonda ngoba akudingeki baphazanyiswe izwe ezintathu-ntathu of the version yokuqala.
Isikhathi ukwakha amasango
Ngakho, kufanele ube nane amabhlogo obsidian ezandleni oye ekhishwe noma ngokwemvelo noma ngosizo ukuxuba amanzi lava. Isikhathi ukwakha isakhiwo ukuthi kuyoba kuwe umnyango esihogweni, okungukuthi, ezweni elisha ukuthi ungakwazi ukuhlola. Setha amabhlogo ukuze benta calandze izinhlangothi ezine emaceleni evundla mpo block amabhlogo asithandathu. Kodwa kuyini na? Uphase ingekho ngembobo futhi lutho? Yiqiniso, ngoba okokuqala udinga ukuthi kusebenze portal.
Thina umlilo amasango esihogo
Sekuyisikhathi ukusebenzisa lula, obukade agodliwe ekuqaleni. Wozani portal futhi ulisebenzise emabhuloki ephansi - ngenxa kweze egcwele ufasimbe onsomi esangweni. Ngalo zidlule ukuya esihogweni.
Game izinsuku ezingu-7 ukuze afe - ngezidingo zesistimu nezinkinga kungenzeka.
Indlela ukulanda futhi kanjani ukufaka aphambe "Maynkraft"
Uyini perk engcono - "Vimbela" noma "Eagle Eye"? Incazelo, izici kanye nezincomo
OKOGU kanye Enterprise sokuqonda nema
Cuba Ihhotela Melia Peninsula Varadero 5 *: izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa
Amahhotela Engels Saratov Region
Umshini wokuwasha kanye dryer. Sibutsetelo abakhiqizi kanye nokubuyekeza